Bara 1976 irra hanga 2014 qabsoon godhamte Tan ABO dhuunfachuuti moo tan Bilisummaa oromootiifi walabummaa oromiyaatii? -
Bara 1976 irra hanga 2014 qabsoon godhamte Tan ABO dhuunfachuuti moo tan Bilisummaa oromootiifi walabummaa oromiyaatii?
bilisummaa June 20, 2017	Leave a comment
Khora sabaa Jechuun maal jechuudha?
Akka heeraafii seera ABO dhatti khora sabaa jechuun akkuma maqaa isaa khora sabni oromoo hundii kheeysatti if arkujechuudha eega qaamni QBO gaggeeysu sadarkaa jiru hundarraa walitti dhufeen booda khora khanarratti Rakkoo jirtuf furmaata khennee qabsoodhaaf kharoora lafakhaaya. Garuu khorri amma yaamame khun akkas nifakkaata oromoon hundi qooda irraa fudhachuuf taa’aa? Yoo oromoon hundi qooda irraa hinfudhanne akkamitti khorasabaa jennee yaamna?
Moo Injifannoo waggoota Afurtaman dabran oromota khutaa biraatifii amantii gargaraa ABO kheysa yaasuu irrati arkamte Labsachuufi? bakka oromonni hundi jiranitti rakkina kheeysa dhaaba ABO hiikhanii humna takkaan dhuguma qabsoo Finiinsufi kan khorri yaamame?? Lakki akkasiimi dubbiin osoo akkas godhuu feene maalif bara afrtama qabsoon nutti fudhatti? Nuti khakhuu Jaallan kheenya warreen lubbuun jiraniifii waregamaniis wajjiin seenne hanga galmaan geenyuu hafuura hin baafannu jechuun qabsotti makhamne. ABO abbaan fedhees haa hundeeysuu san rakkoo teenyaamiti garuu ABO dhunfachuu qofa khayoonteenya! San bara 2013 fi 2014 sadarkaa dhumaa irra geenye gutumaanguututti ABO kheenya taasifanneeti jirra. Arra ABON tan bara 1976 kheeysa jaarraan hooganu tan %99 islaama turte saniimiti jechuudha. Dhugumatti qabsoo dhaaba khana qulqulleesuuf goone qofaamiti sababaa qabsootiin warreen alaa nutti dabalamuu fedhanifi dabalaman if irraa eeynee kan osoo hinbeekamin seenaniis osoo hidda hin hidhatin darbaa guutuguututti gubbaarra hanga jalaatti alaafii kheeysaan dhunfannee asgeenyeera Dhiiga jaallan kheenya lafa hinballeeysine amaanaa hin nyaanne jechuudha. Waan jechaa jiran fakkati malif yoo jettan akkuma yaanni khun ibsutti qabsoon godhamaa turte yaadannoo yeroo dhihoo irraa yoo khaane bara 2013 yeroo dubbataa dhaabaa Yahya Jamaal /Boruu Barraaqaa arihan sababaan tokkolleen hinturre Shira dur lafaa qaban waan hintahin. akkasumatti Tokkichaa achi kheeysatti hafe khan lafee laagaa danqarte itti tahee shira isaanii hunda dandaheetuma wajjiin tirachaa baroota soddomman dabran khan ture Itti aanaa HD Obboo Bultum Biyyootiis dabareen geeysee bara 2014 ifkeeysaa baasan sababni isaan yeroo san khennaniif Itti Aanaa HD lama godhanne ja’anii ummata oromoo guutuu sobanii laaftumatti bira khutan amma dubbiin tolteef gafii oromoon gaafattu deebisuuf qophiidha ja’anii gama khora yaamuuti seenan maliif jennaan aangoo guutuu guututti oromoota hunda firraa fageeysanii dhuunfatan halaaleyfachuuf khora sabaa yaamuun dirqama waantaheefi natti fakkata. Haatahuuti khorasabaa yaamame khanarratti eentu filamuuf taa’a? Tun gaafi qabdii bakka HD,IAN, Ajajaan WBO walii galaatifi Itti gaafatamaan haajaa alaa Dameen Siyaasaa hundi harka isaanii jirtutti eentu filamaan rerrega fakkaatiimire. garuu dubbiin tan duriin gargari arraantana maalif yoochattan yoo HDn filamees namni biraa khan naannoo HD filamuus ABOn tan Warra khutaa tokko taatee oromoodhaaf ifa tahuufteeysi gaafiin guddoon tan ilmaan oromoo khutaalee hafan hundaati kheeysattu tan oromoota baha oromiyatiifii khibba baha oromiyaati khan alaafii mana namafii sa’a itti dhabe khan qe’een itti daaroyte bineensi gaaraalleen itti biyaa godaaneeti. Amma hireen tan Ilmaan Bareentooti eega warri shiraa khan oromoo addaan guuru iduudhaa baheen booda maal akka sababsachuuf taa’an eeyna durii warra sammuun habashaattu addaan nufooye nu hasaasee nubasaasee walitti nunaqee hayyoota kheenya akka harka kheenyaan ajjeefnu nugodhaa ture. Yeroon itti badii dabarteef dhiifama waliif godhanii gama qabsoo dur eegalaniiti tokkumman deebi’an yaaminsa onnee irra buqqa’e waliif godhuun yeroon amma jenna.
Akkuma duraanuu qabsoo hidhannoo tan arrantana khutaan tokko itti abbaa tahee ifiin yaametana uumtanii eega waraana khumotaan lakkaawamu horattaniin booda khabajaa oromummatiif warra sammuun habashaa khan aangoo malee oromummaa hin beeyne ifitti simattanii akka isaan qooda lammummaa isaanii bahan gochuudhaaf yaaltanii garuu isingananii qabsoo isin uumtanii dahannoo taataniif hayjak godhanii harka daaraa hare isin godhan san akkan taane if eegannoo guddoo godhuu qabdan jenna. Gama biraatiin seenaa saaminsa Jaarmayaatiifii tan qabsoo ifiin yaamuuf warri sammuun habashaa godhan tan bara 1976 irraa eegallee waantoota tahan hanga tokko kheeysattuu namoota hoganoota qabsoo khanneen shiraan dhimaman khan akka Buruysoo,Guutama Hawaas,Mul’is Gadaa,Araarsoo Wadaay, Nadhii Gammadafa hogganoota waraana khannen akkamitti akka shirri isaan nyaate isiniif dhiheeysuuf teenya. Hangasittu ija teeysan banadhaa gurra kheesan haxaawadhaati warra sammuun habashaa irraa if eega maliif jennaan akkuma waliin beeynutti warri shiraa afoshaafii Masgiidaas tahee mana sagadaa medialee hunda tohaachuuf akkuma jaarmaya qabsoo saamanii ifiin yaamansan godhuuf akka saree maraatteeti batachaa waan jiraniif hulaa teeysan itti xirqim godhaati qabsoo teenya tan waloo eegalaan dhaamsa kheenya.
Previous “SIYAASAA CAAMSAA (የግንቦት ፖለቲካ)”
Next XALAYAA OBBOLEESSAA: OBBOLEESSA KIYYA: HOJJATAA MOOTUMMAA WAYYAANEE TAHE MARAAF.